Ahoana ny fomba hiatrehana ny dermatitis atopika amin'ny fahatongavan'ny fararano | Bezzia
Toñy Torres | 22/09/2021 23:55 | Torohevitra momba ny fahasalamana
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fararano ihany koa ny olana ara-potoana toy ny dermatitis atopika. Olana amin'ny hoditra izay misy fiantraikany amin'ny fahazazana indrindra, saingy mety hiparitaka amin'ny olon-dehibe amin'ny tranga maro. Ny fiovan'ny maripana dia tranga mety hampidi-doza, nanomboka ny hatsiaka mahatonga ny hoditra ho maina kokoa ary izany dia mitombo ny soritr'aretina ny dermatitis.
Ny dermatitis atopika dia mety miteraka soritr'aretina samihafa amin'ny olona tsirairay, na dia ny toetra mampiavaka azy indrindra aza hoditra maina, mangidihidy, mena, manidina, na mamontsina. Rehefa tsy voafehy izany dia mety hiharatsy ny toe-batana ary miteraka ratra tena maharary aza. Mba hitazomana ity olan'ny hoditra ity amin'ny fahatongavan'ny fararano dia afaka manaraka ireto torohevitra ireto ianao.
1 Dermatitis atopika amin'ny fararano, toro-hevitra hisorohana ny fialan-tsasatra
1.1 Ny adin-tsaina, antony mampidi-doza amin'ny dermatitis atopika
1.2 Mitandrema amin'ny tranga ivelany
Dermatitis atopika amin'ny fararano, toro-hevitra hisorohana ny fialan-tsasatra
Ny tena mampiavaka ny hoditra atopika dia ny tsy fahampian-drano, ny hoditra maina izay manome mangidihidy sy soritr'aretina hafa. Mba hisorohana an'io dia tena ilaina tokoa ny mandoto tsara ny hoditra isan'andro, miaraka amin'ireo vokatra natao manokana ho an'ny hoditra atopika ary amin'ny tranga misy ny ankizy, ny cosmetika dia ampifanarahana amin'ny fahazazany. Isan'andro dia tokony hosorana moisturizer manerana ny vatana, indrindra rehefa avy mandro satria maina kokoa ny hoditra.
Ny fihanaky ny dermatitis dia miseho miaraka amin'ny fiovan'ny maripana, indrindra amin'ny hatsiaka satria very ny sosona voajanahary ao amin'ny hoditra. Noho izany, ilaina ny fananana a moisturizer tsara ary asio mandritra ny andro hitandrina hydration. Mitondrà tavoahangy kely foana miaraka amin'ny fanosotrao, amin'izay afaka mihosotra ianao raha vao hitanao fa manomboka mangidihidy.
Raha ny ankizy, mba tsy hanimba ny hoditr'izy ireo amin'ny fikororohana dia tena zava-dehibe izany tazomy ho fohy sy hadio foana ny hoho amin'ny fotoana rehetra. Ny mangidihidy amin'ny hoditra dia manelingelina tokoa ary sarotra fehezina, ny fitaintainanana manelingelina dia mety hiteraka lesoka lehibe amin'ny hoditra mety ho voan'ny virus mihitsy. Izay mitondra anao any amin'ny làlan-kizorana manaraka amin'ny fitantanana breakout, izay ny fitantanana ny adin-tsaina.
Ny adin-tsaina, antony mampidi-doza amin'ny dermatitis atopika
Ny fiverenana an-tsekoly aorian'ny fialantsasatra, ny fidirana amin'ny asa sy ny mahazatra, ny fifamoivoizana, ny asa be loatra ary ny asa izay manangona ao an-trano, no antony mahatonga azy io hangonina ny adin-tsaina. Ny hozatra voangona dia mivoaka amin'ny fomba samihafa amin'ny tranga tsirairay, ho an'ny olona sasany dia marary kibo tsy tapaka izany. Ho an'ireo izay mijaly amin'ny olana amin'ny hoditra, ny fihenjanana dia miseho amin'ny endrika fipoahan'ny dermatitis ao an-toerana.
Mitadiava fomba hitantanana ny adin-tsaina, toy ny fanaovana fanatanjahan-tena isan'andro, ny fanaovana yoga, na ny fisaintsainana tarihina. Ny fifehezana ny fofonainao dia fomba iray hifehezana ny fihenjanana sy hanamaivanana ireo soritr'aretina vokatry ny hozatra toy ny tsy mahazo aina amin'ny hoditra, aretin'andoha na vavony mankarary.
Tena ilaina koa izany mankanesa any amin'ny biraon'ny dermatologista matetika, satria io fomba io no hahafahan'ny manam-pahaizana manokana manombana ny toetry ny hoditra ary miandrandra ny mety ho valan'aretina. Amin'ny tranga sasany, rehefa miharatsy be ireo, dia ilaina ny fampiasana fanafody misy loha amin'ny kortikosteroid, na eo aza izany dia tokony harahi-maso foana izy io.
Mitandrema amin'ny tranga ivelany
Loza atahorana ny fanafanana, satria manala ny hamandoana amin'ny tontolo iainana ary maina ny hoditra. Raha tsy azonao atao, miezaha hanana kaontenera misy rano eny an-tànany hamoronana hamandoana na moisturizer hampiasanao manokana. Tokony halavirinao koa ny fanaovana akanjo vita amin'ny lamba sentetika, mahasosotra na misy akora mety hanimba ny hoditra.
Miezaha foana mitafy akanjo vita amin'ny akora toy ny landihazo. Ilaina ihany koa ny fanesorana izay mety hiteraka fahasosorana, toy ny marika amin'ny akanjo. Aza manapaka azy ireo fa esory amin'ny fanapahana kofehy manala azy tanteraka amin'ny akanjo. Koa satria raha misy tsipika kely sisa, dia mety hahasosotra kokoa noho ilay marika manokana.
Raha fintinina, handany ny fararano sy ny ririnina amin'ny atopika dermatitis eo ambany fifehezanaTokony ho azonao antoka fa voadona tsara ny hoditrao ary misoroka tontolo tena maina. Ary alohan'ny valanaretina kely indrindra dia mankanesa any amin'ny biraon'ny dermatologist hanombanana ny tranga raha toa ka ilaina ny manomboka fitsaboana zava-mahadomelina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Ahoana no hiatrehana ny dermatitis atopika amin'ny fahatongavan'ny fararano
Ahoana ny fomba fanadiovana seza lamba mba hahatonga azy ireo ho vaovao
Inona no fiantraikan'ny fitiavana amin'ny ati-doha?